PISAREMA 21 Zvinoreva vhesi nendima | MINYENGETERO MARI
musha Munyengetero PISAREMA 21 Zvinoreva vhesi neimwe
PISAREMA 21 Zvinoreva vhesi neimwe
Nhasi tichave tichidzidza Pisarema 21 rinoreva vhesi nendima. Kubatana kwePisarema 21 nePisarema rapfuura kunoonekwa nekuenzanisa (vhesi 2 ne20: 4). Pisarema rine zvokuvonga yekununurwa kwaIshe? (ndima 1-7, kuvimbisa kwamambo kukunda kwemberi nevanhu vake (ndima 8 - 12), uye nemunamato wekupedzisira (ndima 13) Ndima 1 - 13: Chikamu chekutanga (chaMapisarema 21 ), ndeyekutenda kukunda; chikamu chekupedzisira kufungidzira kweanouya kubudirira munaIshe kuburikidza mambo-mukuru. Zviitiko zviviri zvekukunda zvinopa mamiriro ekurumbidza uye munyengetero kuna Commander-in-Chief weIsrael .. mambo mambo.
Mapisarema 21 Zvinoreva Ndima Ndima
Ndima 1: “Mambo uchafara nesimba renyu, Jehovha; uye achafarira kuponesa kwako.
Mambo David aive nezvikonzero zvakawanda zvekutora rufaro mu simba yaMwari. Zvichida mufaro uyu wakauya kubva mukuchengetedza uye kubudirira muhondo kana kumwe kununurwa. Iyo toni zvekuvhurwa kwePisarema rino ndinoshuvira. ?? Kupururudza kwevaMethodist vekutanga mukufara kwemufaro kwakanyanya kuregerera kupfuura kusimba kwedu. Mufaro wedu unofanirwa kunge uine imwe mhando yekuratidza pachena mazviri.
Ndima 2: Makamupa zvinodikamwa nomoyo wake, Hamuna kuramba kukumbira kwemiromo yake. Sera. ”
Simba neruponeso rwaMwari zvakauya kuna Davidi mukupindura kune zvese chishuwo chemoyo wake neminamato yakataurwa (chikumbiro chemiromo yake). Izvi zvinotaura kunzvimbo yakakosha rakapindurwa munamato ane muhupenyu hwemutendi. MuKristu wese anofanira kuziva kunakidzwa kweanowanzoitika, mhinduro dzakanaka kumunamato. Kana muKristu asingafarire chikomborero chemunamato wakapindurwa, imhaka yekuti anenge asina munamato, arikunamata zvisizvo, kana ane chimwe chinotadzisa mukunamata. Zvinhu zvakawanda zvinogona kutadzisa munamato muhupenyu hwemutendi, chimwe chinhu chinomutadzisa kutaura naDavid, ?? Wakamupa moyo wake? Chido chake, uye hauna kuramba kukumbira kwemiromo yake.
Ndima 3: Thou thou prevent him him::::::::: on on on; on; on on on on on on For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For
Mambo Dhavhidhi akaona kuti kunaka yaMwari yakanga yauya kuzosangana naye. Mwari akazviunza kwaari, kupfuura David kudzingirira pasi aya maropafadzo erunako. Izvo zvaive pasina mubvunzo kuti Mwari akaenda pamberi paDavidi nemakomborero, uye kuti David akazviziva nekumurumbidza nekuda kwazvo. Asi kazhinji, zvaisadaro inoratidzika saizvozvo mumakore mazhinji marefu pakati pekuzodzwa kwake pachigaro achiri jaya uye paakazotora chigaro cheIsrael. David akapfeka korona zvese zvechigaro chehushe cheIsrael ?? Rudzi rwakakosha rwaMwari? uye mambo wokukunda. Hunhu hwayo hwegoridhe yakachena inoratidza kukosha kwakaita nyika uye kukunda kwaive.
Ndima 4: Akakumbira upenyu hwenyu, uye mukamupa, Iye, mazuva mazhinji nokusingaperi-peri.
David akaenda kuhondo achinamata kuti Mwari vachengetedze hupenyu hwake, uye nemabatiro aakaita kupemberera mhinduro kumunamato uyu. Mune njodzi yeupenyu-nerufu yekukonana, David akapihwa hupenyu nehurefu hwemazuva.
Ndima 5: Kukudzwa kwake kukuru mukuponeswa kwako, Makaisa pamusoro pake kukudzwa noukuru.
David akaziva kukwidziridzwa kwakauya kumadzimambo nevakundi muhondo; asi apa akazivisa kuti kubwinya uku, uku kukudzwa, ukuru hwaainakidzwa nahwo hwakabva kuna Mwari kwete kwaari.
Ndima 6: Nekuti makamuita iye wakaropafadzwa kwazvo narinhi, Mukamufadza kwazvo nechiso chenyu.
David akataura kuti akaropafadzwa nekusingaperi, asi kwaive kuvepo kwaMwari pachaKe ndiko kwaive kuropafadzwa kwake kukuru uye mufaro. David akafadzwa nekuvapo kwaMwari kupfuura nekorona yehumambo kana kukunda.
Ndima 7: Nekuti mambo vanovimba naJehovha, Uye netsitsi dzeWekumusoro-soro, haangazununguswi.
David akataura kuvimba kwake muna Ngoni raMwari uye kuti raizoenderera richimuchengetedza nekumuropafadza mune ramangwana. Chimwe nechimwe chezvinhu izvi pasina mubvunzo chaive cheMambo Dhavhidha, asi zvakare zviri kana zvakatonyanya kuitika kune Mwanakomana wakakura waDhavhidha, Mesia, Jesu Kristu, Mwanakomana waDavidi.
Ndima 8: Ruoko rwako ngaruwane vavengi vako vese, Ruoko rwako rwerudyi ruchawana vanokuvenga.
David akaziva kuti kunyangwe aikunda muhondo, Mwari haana kuitwa nekuwana kutonga kwake Vavengi. Ruoko rwerudyi rwaMwari (Jesu Kristu), akakunda vavengi vake nevavengi vedu. Akakunda zvivi pamuchinjiko uye akakunda rufu paakasimuka kubva muguva. Tinogona kufunga kuti vavengi vedu ndivo vanhu vari kutipa nguva yakaoma yakatikomberedza, asi ivo vari pasi pesimba raSatani. Satani akakundwa pamuchinjiko naJesu Kristu Ishe wedu
Ndima 9 ne10: Uvaite sevira romoto panguva yokutsamwa kwako, Jehovha achavamedza nehasha dzake, uye moto uchavapedza. Munofanira kuparadza michero yavo kubva pasi, nembeu yavo pakati pavana vavanhu.
Kutaura kwekuti, 'nguva yekutsamwa kwako,' rinotiyeuchidza kuti ikozvino ndiyo nguva yenyasha dzake, saizvozvo ichave nenguva yakatarwa yekutsamwa kwake. Kune zuva rekutsiva kwaMwari wedu; vanoshora zuva renyasha ngavarangarire zuva rekutsamwa iri. David akataura nechivimbo kuvimba kwake kuti Mwari vaizotonga vavengi Vake, uye airatidza kuvimba nekutaura kwakasimba kunyange Mwari aizozvisarudzira avo vanobva kwaari. Chibereko chavo pano zvinoreva vana vavo vese, kunge michero yekushanda kwavo.
Ndima 11: Nekuti vakafunga kukuitira zvakaipa, vakafunga zano rakaipa, risingagoni kuitwa.
Mashoko akasimba ekutonga ari muPisarema 21: 8-10 anoita kunge anoda tsananguro. Nei chirango chakakomba kudaro? Nekuti vakapandukira Mwari nevanhu vake nemaune, kunyangwe hazvo zvirongwa zvavo zvaive zvakakosha kupfuura kugona kwavo kuita (vakafungidzira chigadzirwa chakashata icho ivo vasingakwanisi kuita). Chakaipa nechinangwa chine utachiona mukati maro chisingawanikwe muzvivi zvekusaziva; Zvino, savanhu vasingadi Mwari, vane zvakaipa zvakambofungidzirwa, vanorwisa evhangeri yaKristu, mhosva yavo yakafanira, uye kurangwa kwavo kuchaenzana.
Ndima 12: Naizvozvo unofanira iwe [kana] unofanira kudziita vatendeuke dzavo, ugadzire [miseve yenyu] pamusoro hungiso dzako pamusoro pechiso pavo;
David anoona uye pamwe akaona chaiko vavengi vaMwari vachitiza panhandare yehondo, nemisana yavo yakanangana nemauto aMwari ari kuuya. Muchagadzira miseve yenyu pachishongo, kuti zvitarire kumeso kwavo; Akaona vavengi vaMwari sevasingabatsiri pamberi pemiseve yakagadzirira uye tambo yehondo-yakafanana, vachitonga Mwari. Miseve yake yakanangiswa kumeso kwavo. Mitongo yaMwari inonzi yake miseve, ?? ichipinza, ichikurumidza, ichokwadi uye ichiuraya.
Ndima 13: Simudzirwai, Jehovha, nesimba renyu. Naizvozvo tichaimba uye ticharumbidza simba renyu;
David akanamata Mwari zvakananga pano. Iye akasimudza ISHE uyo aive neuhwu simba hwepamusoro mukati make, uye haana kumboda kutsamira pane mumwe simba. ??Zvisimudzei, imi Ishe zvisikwa zvako hazvigoni kukukudza. Tichaimba uye ticharumbidza simba renyu mushure mekutaura kwakananga kwekurumbidza, David akataura kutsunga kwaizoitwa iye nevanhu vevanhu rambai kukudza Mwari uye kuzviita murwiyo. Mapisarema aya ekuguma anoenderana ne toni mukati mose. Iro rizere nerumbidzo kuna Mwari nekuda kwemaropafadzo ekukunda, kununurwa, uye nemhinduro yomunamato. Aya mafungiro anofanirwa kugara ari pakati pevanhu vaMwari.
Tinoda Rini Pisarema Aya
Patinoremerwa uye tinonzwa kusakara kusasimba kusasimba.
Kana tichinzwa sekunge hatisi kuhwina pahupenyu uye pane kukundwa pamusuwo wega.
Kana zvikaita sekunge nyika ino yatinogara izere nezvakaipa uye isu hatikwanisi kuona zvakanaka.
O Ishe, ndinofara kuti Makandipa simba pandinovimba nesimba rangu, uye izvi zvese hazvina kushanda.
Simudzwa, Jehovha, nesimba renyu, kana muvengi achitsvaga kuparadza mweya wangu, makamira neni mukandiponesa. Hareruya
Ndinonamata kwamuri Ishe kuti mundipe simba rakawanda uye simba rakawanda pamusoro pevavengi vangu
Ndinonamata Ishe, kuti mundipewo nyasha zhinji kuti ndimire ndakasimba mukutenda kwangu uye ndikunamatei kweupenyu hwangu hwese.
Previous nyayaPSALM 18 KUSHINGA VANOTI VESE
inoteveraMapisarema100 zvichireva ndima nevhesi
Makumi matatu eminamato yekununurwa uye ndima dzebhaibheri
Kunamata Points Yekusimbiswa Kana Iwe Uchipomerwa Zvakaipa